Waa Maxay Inkaarta Ku Dhacday Pep Guardiola Ee Uu Ka Baqayo In Ay Arsenal Ugu Gudubto Finalka FA Cup? - Gool24.Net
Waa Maxay Inkaarta Ku Dhacday Pep Guardiola Ee Uu Ka Baqayo In Ay Arsenal Ugu Gudubto Finalka FA Cup?
Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka baqaya inuu mar kale dhibbane u noqdo kulanka caawa ee Arsenal habaarka kaga dhacay kulamada semi-finalka, isla markaana uu gacan-yarihiisii hore ee Mikel Arteta uu ku garaacdo tartanka FA Cup.
Guardiola ayaa rumaysan inuu yahay mid habaar kaga dhacay kulamada semi-finalka oo uu isku soo tijaabiyey sannado badan oo uu macallin soo ahaa.
Waqtiyadiisii Barcelona, Bayern Munich iyo Manchester City intaba, Pep Guardiola waxa uu semi-finalka soo gaadhay 21 jeer, laakiin toddoba ka mid ah ayaa si xun loogu garaacay, waana sababta uu u aaminay in kulamadan inkaari ka haysato.
Arsenal iyo Manchester City oo caawa ku kala bixi doona Wembley Stadium, waxa midkooda finalka u gudba ay sugi doontaa Manchester United iyo Chelsea oo Axadda isla garoonkan ku ciyaaraya, waxaana ciyaarta ugu dambaysa ee finalka la qaban doonaa maalinta ugu horreysa bisha dambe ee August.
Tababaraha reer Spain waxa uu tibaaxay inuu jeclaan lahaa in falka ay iskugu yimaaddaan labada Manchester, laakiin ay ka horreyso shaqo badan, waxaanu yidhi: “Aan idhaahdo, United hasoo garaacdo Chelsea, annaguna aanu soo garaacdo Arsenal, si aanu tan (All-Manchester final) u saayno. Laakiin labada kooxoodba ma fudud, mana garanayo wax aan idhaahdo maanta, xataa hal daqiiqo na kamaan fikirin cidda ay noqon karto kooxda finalka aanu iskaga hor iman doono.”
Pep Guardiola waxa uu ka hadlay inkaarta ka haysata kulamada semi-finalka, waxaanu yidhi: “Intii aan xirfaddayda ku jiray, waan dhibaatooday kulamada semi-finalka. Waxa nooga fududaa ciyaaraha finalka oo aan aad iyo aad ugafa fiicanahay. Semi-finalka aan ku guul-darraysatay ayaa ka badan finalka aan khasaaray. Aad ayay u adag yihiin, sidaa darteed, waynu eegi doonaa waxa dhici doona.”